Hiran State - News: Mudanayasha baarlamaanka, beesha caalamka iyo Shariif Hasan maxaa kala heysta.
Mudanayasha baarlamaanka, beesha caalamka iyo Shariif Hasan maxaa kala heysta.
HS:-Xildhibaan Moowliid Macaane Maxamuud oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlmaanka ayaa ku eedeeyey gudoomiyahii hore ee baarlamaanka xildhiban Shariif Xasan in uu meel uga dhacay Baarlmaanka iyo shacabka Somaliyeed intaba.
Moowliid Macaane ayaa sheegay in Shariif Xasan uu xildhibaanada ku tilmaamay dad fowdo wadayaal ah isagoona sheegay in Shariif Xasan ay maxkamad kula soo tiigsan doonaan hadalkaasi meel ka dhaca ku ah mudanyaasha baarlamaanka ee qaarkood ay god u galeen xilkaan iyagoo haya.
Sidoo kale Moowliid Macaane Maxamuud ayaa mar la wedyiiyey haddii ay dhici karto in xildhibaan Shariif Xasan uu xilkiisa si wata inta uu ka dhamaanayo waqtiga yar ee u haray,ayuu ku jawaabay in ay la mid tahay Alaah ha u naxariistee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Maxamed Siyaad Bare oo soo noqda oo qabta xilka Gudoomiyaha Baarlmaanka.
"Inaali Laahi wa Inaa ilaahu Raajucuun afka uma fiicna in la yiraahdo Shariif Xasan xilka maku soo laaban karaa, Siyaad Bare Alaah ha unaxariistee ayaa uga dhow in uu Gudoomiyaha Baarlmaanka noqdo"ayuu yiro Moowliid Macaane.
Khilaafkaanka mudanayasha baarlamaanka ayaa noqday mid iska joogto ah,waxaana ay gaartay in uu soo kala dhaxgalo wafdi loogu magac daray xaqiiqo raadin iyadoona xildhibaanadii xilka ka qaaday xildhibaan Shariif Xasan ay ku adkeeysanayaan go'aankii ay qaateen.
Mar aanu shacabka Mogdisho ka soo aruurinay sida ay u arkaan qilaafkaan ayey ku soo kaabiyeen in mudanayaasha uu heysto xaqii iyo nabsigii ay ka galeen Farmaajo oo ay ku bahdileen beesha calaamka hortooda. laakinse mudanayaashu iyaguna waxey leeyahiin Farmaajo waxaa meesha ka ceyriyey xaqii uu ka galay shacabka maadaama ay aad u diidanaayeen in dalka laga saaro xiliga kumeel gaarka isaga iyo wasiiro qurbaha ku noolaa mudo oo uu meesh asoo dhoobay.
Laakinse xaalada ma ahan sidii ay aheyd markii Farmaajo shaqada ay ka ceyrinayeen Mahiga iyo Musaveni hada waxey mareysaa mudanayasha baarlamaanka oo isku dhinac ah iyo Shariif Hasan iyo beesha caalamka oo isku dhinac ah, waxaana la sugayaa inta ay beesha caalamku ka dhahayaan wax ka jiro ma leh go,ankii ay ka gaareen ku dhawaad 300 oo ka mid aheyd mudanayasha baarlamaanka xildhibaan Shariif Hasan oo ahaan jiray gudoomiyahii baarlamanka Somaliya.
Sida muuqata xalku waxuu ku jiraa in Shariif Hasan meesha ka baxo maadama uu horey u bahdilay muwaadiniin badan oo Somaliyeed ayey ku cel cleiyeen waxgarad badan oo ku nool qeybo badan oo dalka ka mid ah.
· admin on December 18 2011 11:19:29 · 0 Comments · 1750 Reads ·
14,614,472 unique visits